Exclusive: Wareysi aan la yeelanay Nin kasoo goostay Al-Shabaab - Qeybta 2-aad | KEYDMEDIA ONLINE
Exclusive: Wareysi aan la yeelanay Nin kasoo goostay Al-Shabaab - Qeybta 2-aad
Keydmedia Exclusive - Aqrisatayaal waxan idiin soo gudbineynaa Wareysigii aann la yeelanay Maxamuud Hilaac Qeybtiisi Labaad ( Halkaan ka Aqriso Qeybta 1aad - ) oo ka tirsanaa Dagaalyahanada Kooxda Shabaab oo ka sheekeenaya Noloshiisa Labadii Sano ee uu kamid ahaa Kooxdasi, hadana ey ka Muqato Qoomameyn iyo Walaac xoog leh.
KEYDMEDIA: Hadii aad Kooxda Shabaab Dhaqaale Owgeed ugu soo biirtay oo hada Dhul iyo Baabuur aad leedahay, Maxaa kaa soo saaray???
Maxamuud Hilaac: Saaxiib Nafsadeyda ayaan u baqay, kuwa aniga ila mid ahaa ayaan qaar kamid ah Gacanteyda ku duugay.
KEYDMEDIA: Oo Yaa ka baqeysay?
Maxamuud Hilaac: Dhexdayada iyo kuwa naga soo horjeedaba... khatar baan ka filaayay...
KEYDMEDIA: Dhexdiina hadii aad Shabaab tihiinbaa?
Maxamuud Hilaac: Haa, Marmar ayaa lagu fuli Amar aadan ku qanacsaneyn, hadii aadan fulinnah adiga ayaa lagugu fulinayaa.
KEYDMEDIA: Maxaa kamid ahaa Amaradaas?
Maxamuud Hilaac: Waa kuu sheegay waxey la xariireyn Howlgaladii aan fulin jirnay.
KEYDMEDIA: "Operation" aad fulisay ama aad wax ka fulisay oo si fiican idinku najaxday, wax manooga sheegi kartaa?
Maxamuud Hilaac: Kii Qaraxii Airaportka iyo Qaraxyo kale...
KEYDMEDIA: Haye, kuwa kalenah? Goormee ahaayeen? Xageesa ka dhaceen?
Maxamuud Hilaac: Anigu midkaas Airportka ayaan idiin sheegay.
KEYDMEDIA: Maxamuud, horta Nin Dhalinyaro waad tahay laaakiin Aniga 20 Jir waa igala weyntahay, hadaan marka Qofahaantaada ku Su'aalo: Ma ogtahay Qaraxaas aad sheegatay ee Airportka ka dhacay iney Dad Masaakiin ah oo Tuugsanahahay ee ku Nafwaayeen?
Maxamuud Hilaac: Walaahi Aniga ma garanaayo wixii ku nafwaayay, Amarkaas baa anagu fulineynay.
KEYDMEDIA: Radio-yaha ma ka maqashay in Dad Masaakiin ah ey ku Nafwaayeen Qaraxaas ama Qaraxyadii kale ee aad fuliseen?
Maxamuud Hilaac: Anaku Radio-yaal ma dhageysano.
KEYDMEDIA: Oo ma garankarit miyaa in Dad ey ku dhinteen Qaraxyadaas?
Maxamuud Hilaac: Haa waan garankaraa waana mida aan hada u go'aansaday in aan idinla hadlo, waxaan uga soo baxay, waxaa kamid ah: Amaradaas oo kale oo hadii aadan fulin adiga naftaada Halis galeyso hadii aad fulusidnah aad Walaac iyo Qoomame ku nooshahay.
KEYDMEDIA: Waxaad noo sheegtay inaad Labo Sano kamid aheyd Kooxda Shabaab. Labadaas Sano ma fursad baad weyday aad uga soo baxdid?
Maxamuud Hilaac: Saaxiib Meesha waa la is ilaaliyaa oo Amniyaadka, Amniyaad kale ayaa daba socda. Meel markaas aan u baxsadanah hada kahor ma helin.
KEYDMEDIA: Walaac iyo Qoomame ayaad ka hadashay, waa hadal weyn. Habeenkii markaad seexatit miyuu kugu badanyahay Walaaca iyo Qoomamuhu mise intaad soo jeedid.
Maxamuud Hilaac: Walaahi iima xisaabsanah laakiin Walaac waa jiraa...
KEYDMEDIA: Dareenkaagu see yahay hada?
Maxamuud Hilaac: Waa Dareen Taxadar joogta ah Marmarka qaarkoodnah waxaa ii uraahaya Dhiig!
KEYDMEDIA: Oo Dhiigu ma Uraa? Urkee buu leeyahay?
Maxamuud Hilaac: Walaahi aniga Maar baa inta badan ii urtah.
Maxamuud Hilaac Horudhiccii Wareysigiisi intaas buu ku egyahay, Waxaana soo socda Film Documentry oo ku saabsan Wareysiga oo kaamil ah.